वित्तीय संस्थाका कर्पोरेट नारा : काम र नाराबीचको सम्बन्ध मिल्छ त ? | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण वित्तीय संस्थाका कर्पोरेट नारा : काम र नाराबीचको सम्बन्ध मिल्छ त ?
on: ६ बैशाख २०७६, शुक्रबार ०६:३४ लेख | दृष्टिकोण
‘कर्पोरेट स्लोगन’ अर्थात् संस्थागत नाराले सामान्यतया संस्थाको भित्री रहस्यलाई प्रतिबिम्बित गर्न खोजेको हुन्छ । यो एक प्रकारको संस्थाको भिजन नै हो । हेर्दा संक्षिप्त लाग्ने यस्ता नारा सरल र बुझिने भाषामा राखिएका हुन्छन् । लामो नाराभन्दा छोटो र संक्षिप्त नारा प्रभावपूर्ण हुन्छ । संक्षिप्तता यस्ता नाराको पहिलो विशेषता मानिन्छ । भाषा पनि स्पष्ट, सरल र बुझिने हुनु जरुरी छ । त्यस खाले नाराले संस्थाको अल्पकालीन उद्देश्य परिपूर्ति गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन प्रभाव छाड्ने किसिमको हुनुपर्छ । त्यस्ता नाराबाट सेवाग्राही, समाज र सम्बद्ध क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव पार्नु नै कर्पोरेट नाराका अभीष्ट हुन्छन् । तर, के यो राखिरहनु जरुरी छ ? यो नराखे पनि आफ्ना सेवामा कुनै कसर बाँकी हुन्छ र ? राखे पनि तिनलाई कतिले ध्यान दिन्छन् ? स्लोगन एकातिर र काम कारबाही अर्थात् प्रवाहित सेवा अर्कातिर जस्ता अनुभव पनि त भेटिएकै छन् । त्यसैले नारामा उल्लिखित सुन्दर र आकर्षक भावजस्तै सेवाको स्तर, आकर्षक र प्रभावी हुन सकेन भने ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन सक्छ ।
हुनात कर्पोरेट क्षेत्रमा यस्तो नारा राख्ने एक खाले संस्कार नै बसिसकेको छ । संस्थाको कुनै ट्रेडमार्क (प्रतीक चि≈न) जस्तै कर्पोरेट स्लोगन पनि अनिवार्यजस्तै हुन थालेको देखिन्छ । उत्पादनसित सम्बद्ध निजी कम्पनीहरू मात्र होइन, अचेल बैंकिङ क्षेत्र पनि यस्ता नाराप्रति लोभिएका देखिन्छन् । प्रतीक चिह्न, कर्पोरेट स्लोगनका अतिरिक्त अचेल कर्पोरेट कलर अर्थात् संस्थागत रङ्गले पनि कुनै विशेष अर्थहरू दिन थालेका छन् । एउटा निकै आकर्षक कर्पोरेट स्लोगन ‘हुलास भए अरू किन खोज्ने’ हामीले धेरै अघिदेखि सुन्दै आएका हौं । यो नारा उत्पादन क्षेत्रसित सम्बद्ध कुनै नेपाली उद्योगको हो । अब यसले आफ्ना उत्पादनलाई अन्य उत्पादनसित तौलेर हेर्ने व्यापारिक अभीष्ट पनि राखेको होला । त्यतिमात्र होइन। हुलासका सामानहरू भए अरू त्यस्तै सामानको खोजी नै गर्नु पर्दैन है भन्ने भित्री अभीष्ट पनि देखिन्छ यसमा । तर, के यो नाराभित्र उसका सामानको गुणस्तर समेटिएको होला त ? यस्ता कर्पोरेट नाराले पक्कै पनि सम्बद्ध संस्थाको भित्री मिशनलाई भने प्रस्ट्याउन खोजेकै हुन्छ । कर्पोरेट स्लोगनले सामान विक्री गर्ने मात्र उद्देश्य नराखेर आफ्ना सेवाको गुणस्तरको संकेतलाई पनि उजागर गर्न सक्नुपर्छ । खास गरेर आजको प्रतिस्पर्धी बजारमा सामान बिकाउनेभन्दा पनि टिकाउनेचाहिँ त्यस खाले स्लोगानको अभीष्ट रहनुपर्छ । यस्ता नाराले मात्र विज्ञापन गर्ने अभीष्ट राख्नु हुँदैन ।
यसै सन्दर्भमा बैंकिङ कर्पोरेटहरूले राख्ने गरेका केही स्लोगनहरूको चर्चा गर्नु यस लेखको मूल अभीष्ट हो । नेपालका केही वाणिज्य बैंक (‘क’ वर्गका वित्तीय संस्था) हरूका कर्पोरेट स्लोगनहरू हेरौं । ती परस्परमा आफूलाई अर्को उस्तै बैंकभन्दा भिन्न हो भन्ने अनुभूति दिन खोज्छन् । कतिपयका स्लोगन त कवितात्मक पनि छन् । कतिपयका अमूर्त । कृषिक्षेत्रका लागि अल्प/मध्यम र दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गर्ने भनेर स्थापित बैंक कृषि विकास बैंक अचेल वाणिज्य बैंकमा परिणत भएको छ । तर, अझै उसको नामबाट कृषि विकास भन्ने वाक्यांश हटेको देखिँदैन । यसले पहिलेझैं कृषिक्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पनि छाडेको देखिन्छ । यस बैंकको कर्पोरेट स्लोगन छ, ‘तपार्इं हाम्रो घर आँगनको बैंक’ । सुन्दा राम्रो लाग्छ । उपयुक्त पनि । तर, के यो बैंक कृषकको घरआँगनमा पुगेको छ त ? पहिले खुलेका शाखाहरू समेत द्वन्द्वकालीन समयमा सबैजस्तो उठेर हिँडे । अहिले केही खोलिएका होलान् । पहिलो कुरो त ‘कृषि विकास बैंक’ नामका कारण वाणिज्य बैंक हो भन्नेमै आम नागरिकका मनमा विश्वास लागिहाल्दैन । झट्ट सुन्दा विकास बैंक र त्यो पनि कृषिको विकासका लागि आएको बैंक हो भन्ने बुझाइ हुन्छ । यसैले कर्पोरेट स्लोगनको छनोट गर्दा बैंक अनुकूलन गर्न पनि आवश्यक हुन्छ । एनआईसी एशियाको कर्पोरेट स्लोगन छ, ‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ । सुन्दा कवितात्मक लाग्छ । पहिले यसको स्लोगन, पहिलो चार शब्द मात्र थिए । अचेल पछिल्ला चार शब्दसहित यसको कर्पोरेट स्लोगन आएको देखिन्छ । यहाँ उल्लिखित ‘राम्रो पनि’ वाक्यांश आफूले आफैलाई राम्रो भन्ने कुरा कति सुहाउने हो । सेवासित सम्बद्ध संस्थाले यसखाले स्लोगन राख्दा आम मानसमा जाने सन्देशचाहिँ उल्टो पनि हुन सक्छ । कर्पोरेट स्लोगन राख्दा संक्षिप्ततामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यस्तै माच्छापुच्छ्रे बैंकको कर्पोरेट स्लोगन ‘सबल उत्कृष्ट अनि विश्वसनीय’ छ । यो बैंकले आफूले आफैलाई उत्कृष्ट बैंक भनेर नाक फुलाएको त होइन ? यस खाले सन्देश जाने गरी पनि कर्पोरेट स्लोगन राखिनु बुद्धिमानी होइन । ‘विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं ’ भन्ने प्रभु बैंकको कर्पोरेट स्लोगन केही अमूर्त लागे पनि बैंकिङ कारोबार विश्वासमा बाँच्ने भएकाले त्यो सान्दर्भिक नै देखिन्छ । नेपालमा कार्यरत एक मात्र अन्तरराष्ट्रिय बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको कर्पोरेट स्लोगन पनि केही अमूर्त नै छ । अन्तरराष्ट्रिय बैंक भएकाले र यसको यो ग्रूपकै कर्पोरेट स्लोगन भएकाले पनि यो अङ्ग्रेजी भाषामा रहेको देखिन्छ ‘हियर फर गुड’ । भाषिक संक्षिप्तताका दृष्टिले यो निकै उत्कृष्ट लागे पनि नेपालमा स्थापित बैंकको अंग्रेजी स्लोगन नेपालीका लागि ज्योति बिकास बैंकले अंग्रेजीे भाषामा राखेको कर्पोरेट स्लोगन ‘मोर द्यान ब बैंक’ जस्तै लाग्नु अन्यथा होइन । यस्तै सिटिजन्स् बैंकको ‘योर पार्टनर फर प्रोग्रेस’ नारा छ । यसलाई ‘तपाईंको उन्नति र प्रगतिको सहयोगी’ राख्दा केही बिग्रने थिएन । नेपालकै वित्तीय संस्थाको अंग्रेजी मोहमाथि भने आलोचना गर्ने स्थान रहेको छ । अंग्रेजी भाषामै सही एउटा विकास बैंकले राखेको उपर्युक्त कर्पोरेट स्लोगन भने निकै आकर्षक र उपयुक्त देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरूकै कुरा गर्दा तुलनात्मक हिसाबले ग्लोबल आईएमई बैंकको कर्पोरेट स्लोगन ‘सबैको बैंक’ निकै संक्षिप्त र आकर्षक एवम् संस्थाको प्रकृति अनुकूलन देखिन्छ ।
नेपाली वित्तीय संस्थाहरूको कर्पोरेट स्लोगनका यी केही सांकेतिक उदाहरण मात्र हुन् । कर्पोरेट स्लोगन कस्तो राख्ने ? कसरी राख्ने ? के के राख्ने ? कति राख्ने ? भन्ने कुरा रचनात्मक काम हो । संस्थाको कामसित अमिल्दो, ज्यादै अमूर्त लाग्ने र धेरै लामो स्लोगन पनि सुहाउँदैन । हेर्दा साधारण लाग्ने तर आन्तर्यमा गहन र मिहीन अर्थ बोक्ने कर्पोरेट स्लोगनको खोजी गर्नु उचित हुन्छ । यो संस्थाको ब्र≈म वाक्यजस्तै हो । जे होस् , अचेल कर्पोरेट स्लोगन एउटा अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ । यो आप्mनो संस्थाको पहिचानसित पनि सरोकार राख्ने विषय भएकाले कर्पोरेट स्लोगनले दिने दीर्घकालीन प्रभावलाई बेवस्ता गर्न मिल्दैन ।
१३ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:२१